Nnwom 88 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔbɔɔ mpae sɛ wonnye no mfi owu mu
“Me nkwa abɛn Ɔdamoa” (3)
“Anɔpa biara me mpaebɔ ba w’anim” (13)
Dwom. Kora mma+ ayeyi dwom. Wɔde ma dwom kyerɛfo; wɔto no wɔ Mahalat* kwan so, ebinom to a, na ebinom agye so. Esrahini Heman+ Maskil.* 88 O Yehowa, me nkwagye Nyankopɔn,+Ade kye a, misu frɛ wo,Na ade sa nso a, meba w’anim.+ 2 Ma me mpaebɔ nnu w’asom,+Na yɛ aso ma* me sufrɛ.+ 3 Efisɛ amanehunu ahyɛ me* ma,+Na me nkwa abɛn Ɔdamoa.*+ 4 Wɔde me aka wɔn a wɔrekɔ amoa* mu+ no ho dedaw;Mayɛ ɔbarima a n’asɛm yɛ mmɔbɔ;*+ 5 Mayɛ sɛ obi a ɔda awufo mu;Mete sɛ owufo a ɔda ɔdamoa mu;Wonkae no bio,Na woagyae no hwɛ.* 6 Wode me ato amoa a emu dɔ mu,Amoa donkudonku kɛse bi a emu yɛ sum mu. 7 W’abufuw ayɛ duru wɔ me so,+Na woma w’asorɔkye bu fa me so. (Sela) 8 Woapam m’amannifo afi me ho kɔ akyirikyiri;+Woama madan akyiwade ama wɔn. Me ho aka mu, na minnya me ho ntetew. 9 M’amanehunu nti, m’ani so ayɛ wusiwusi.+ O Yehowa, wo na misu frɛ wo daa nyinaa;+Wo na metrɛw me nsam su frɛ wo. 10 Wobɛyɛ anwonwade akyerɛ wɔn a wɔawuwu anaa? Awufo a wontumi nkeka wɔn ho betumi asɔre ayi wo ayɛ?+ (Sela) 11 Amusiei na wɔbɛka wo dɔ a enni huammɔ no ho asɛm anaa?Anaasɛ wɔbɛka wo nokwaredi ho asɛm wɔ ɔsɛe amoa mu?* 12 Nkurɔfo betumi ahu w’anwonwade wɔ sum mu?Na wo trenee nso, nnipa behu wɔ asaase a wɔnkae obiara wɔ so+ no so anaa? 13 Nanso, O Yehowa, meda so ara su frɛ wo;+Anɔpa biara me mpaebɔ ba w’anim.+ 14 O Yehowa, adɛn nti na woapo me?*+ Adɛn nti na wode w’anim ahintaw me?+ 15 Efi me mmofraaseMahu amane saa ara, na mereyɛ awu;+Esiane ɔhaw pii a woma me fa mu nti, matɔ mum. 16 W’abufuhyew aboro me so;+Wo ho hu abubu me. 17 Wo ho hu twa me ho hyia sɛ nsu daa nyinaa;Ne nyinaa bom ba me so bɛka me hyem.* 18 Woapam me nnamfo ne me mfɛfo afi me ho kɔ akyirikyiri;+Esum na abɛyɛ m’adamfo.
^ Anaa “ahyɛ me kra.”
^ Anaa “Mayɛ sɛ ɔbarima a onni ahoɔden.”
^ Anaa “woayi wo nsa afi no so.”
^ Anaa “wɔ Abadon.”
^ Anaa “woapo me kra.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ba me so prɛko pɛ.”